कमरेड पाताल | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 08/02/2008 - 08:35
शहरमा जाडो धेरै बढेको छ । केही दिनदेखि मन पनि अलि नै बढी चिसो भएको छ । बिहान यति अबेरसम्म सिरकमा गुजुल्टिएर बसिरहन मन पराउने मेरो स्वभाव नै होइन । आज त अलिक बढी जाडो पनि भयो । आफू हिंड्ने बाटो हिजोभन्दा बढी उवड-खावड र कष्टकर देख्न थालेको छु । आफ्नै अनुभूतिसँग आफैंलाई कहिलेकाहीं डर लाग्छ । मभन्दा अघिल्लो पुस्तामा देखिएको निराशाले कतै मलाई छोप्दै गएको त हैन - हिजोआज आफैंलाई यो प्रश्न सोध्छु । फेरि आफूले आफैंलाई उत्तर दिन्छु- अरुको कारणले आफ्नो उद्देश्यलाई बराल्नु आफ्नै कमजोरी हो ।
मनलाई बलियो बनाएर घरिघरि यसैगरी सोच्छु । नकारात्मक कुरालाई धूरीमा राखेर नसोचौंभन्दा पनि मलाई बेलाबेलामा यसले झम्टिरहन्छ । आज कमरेड पातालको हेराइ मप्रति पहिलेको भन्दा धेरै फरक थियो । हुन त, केही समयदेखि नै उनको हेराइ मप्रति अत्यन्तै अस्वाभाविक भएको मैले महशूस गर्न थालेको छु । मैले राखेका कार्ययोजना र तर्कहरुमा उनको नकारात्मक धारणाले ठाउँ पाउन थालेको थियो । हिजोआजका केही बैठक र भेटघाटहरुबाट म यो निश्कर्षा पुगेको थिएँ । म विगतका केही घटनाहरुको जति साक्षी हुँदैआएको छु, मलाई भविष्यको बाटो झन्-झन् कमजोर र जीण्ा बन्दै गएको बोध भइरहेको छ ।
एकछिनपछि कमरेड शान्ता चिया लिएर टुप्लुक्क भित्र पसिन् । म अचम्मित भएको थिएँ, त्यसबेला । तडक-भडकपर्ूण्ा जिन्दगीको विरोध गर्ने मान्छेलाई त्यो अवस्थामा देख्दा म एक प्रकारले छाँगाबाटै खसेको थिएँ । त्यस दिनको उनको ओठको लिपिष्टिक र अनुहारको लाली, पाउडर मैले कल्पनासम्म गर्न सकेको विषय थिएन । धेरै बैठक र भेलाहरुमा कमरेड शान्ताका \_'शादा जीवन र उच्च विचार\_'का धारणाहरुबाट म पटक-पटक प्रभावित भएको छु । त्यस दिन कमरेड शान्ता पनि मेरो उपस्थितिबाट अत्यन्त क्रोधित भएको मैले अनुमान गरेको थिएँ । मसँग त्यति राम्रो व्यवहार प्रस्तुत गर्ने मान्छे, त्यस दिन उनी मसँग बोल्दै बोलिनन् । उनले त्यस दिन लगाएका अनेकौं सुनका गहनाहरु देखेर म दङ्गदास भएको थिएँ । केही छिनपछि कमरेड पाताल त्यही बैठक कक्षमा पसेका थिए । मेरो उपस्थितिले उनी पनि चकित भए । मेरो उपस्थिति त्यहाँ \_'कवाफभित्रको हड्डी\_' बनिरहेको कुरामा म प्रष्ट थिएँ ।
\_'तपाईं सूचना नगरी किन आउनुभयो -\_' आँखा रातो पार्दै कमरेड पातालले मसँग भनेका थिए ।
\_'सूचना नगरी आएको मलाई राम्रौ लाग्दैन ।\_' कमरेड पातालले फेरि आफ्नो आक्रोशपर्ूण्ा निर्ण्र्ाासुनाए र श्रीमतीसँग खुसुक्क कुरा गर्ने निहुँमा बाहिर निस्किए ।
त्यस दिन कमरेड पातालको घरबाट बाहिर निस्किएपछि मैले पार्टर्ीीे भविष्यमा एउटा अँध्यारो छायाँ देखेको थिएँ । पार्टर्ीी उनी चानचुने नेता थिएनन् । एक जना प्रभावकारी नेता ।
त्यसका धेरै दिनहरुसम्म मेरो मष्तिष्कमा जाँतो जम्तो एउटा चिज घुमिरहृयो । राति न्रि्रालाई समेत प्रभावित पारेको थियो त्यो घटनाले । त्यसपछि मलाई आफैं सामेल भएका जुलुसहरुसँग पनि आफैंलाई अविश्वास पैदा हुन थालेको थियो । आफ्नो यात्रा नै गहुङ्गोजस्तो लाग्न थालेको थियो ।
त्यसपछिका दिनहरुमा कमरेड पातालले मलाई हर्ेर्ने आँखामा आतंकको बादल घुमिरहेको देख्न थालेको थिएँ ।
\_'व्यक्तिगत सम्पत्तिका बारेमा चिन्ता लिने मान्छेले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई कसरी सहयोग पुर्‍याउन सक्छ -\_' भरखर आन्दोलनमा आएका सामान्य कार्यकर्ताहरुलाई यसो भन्दै उनी कडा शंकासाथ झम्टिने गर्थे ।
तर पोहोरको त्यस घटनापछि भने म उपस्थित भएका छलफलहरुमा पहिले-पहिले गर्ने ठूल्ठूला क्रान्तिकारी कुराहरुमा उनी सचेत देखिनथाले । अलि हच्किन थाले ।
कमरेड पातालको तर्कशैलीले उत्साहित र ऊर्जाशील मान्छेहरुलाई धेरै प्रेरणा पनि दिन्थ्यो तर केही सामान्य मानिसहरु भने कडा कुरा सुनेर आन्दोलनको मैदान छाडेर भाग्थे । उनको आक्रामक र ओजिलो शैलीको प्रभावमा परेर धेरै कमरेडहरुले आफ्नो छोराको नामसमेत \_'पाताल\_' राख्न थालेका थिए ।
आन्दोलनमा उनको नियमित लगावले परारैको त्यो घटनालाई मैले विस्तारै-विस्तारै बिर्सिदै जानथालेको थिएँ ।
त्यस दिन हामी केही साथीहरु सरकारद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा आयोजित \_'नेपालबन्द\_'को कार्यक्रम सफल पार्न मशाल जुलूसको तयारीका लागि मशाल बनाउन इन्द्रचोकको एउटा पुरानो घरमा जम्मा भएका थियौं । जुलूस कार्यक्रमको लागि मानिसहरु जुटाउने, रुट तय गर्नेदेखि लिएर सम्पर्ूण्ा कार्य त्यही बैठकबाट गर्नेसमेत तय भएको थियो । त्यो निर्ण्र्ााो जानकारीसमेत हामीलाई कमरेड पातालले नै गराएका थिए । त्यो कार्यक्रमको नेतृत्व पनि कमरेड पातालले नै गरेका थिए । बिहानै बोलाइएको भए पनि धेरै साथीहरु ढिलो आइपुगेका थिए कार्यस्थलमा । त्यसै गरेर कमरेड पाताल पनि त्यहाँ ढीलै गरेर आइपुगे ।
\_'पार्टी काममा धेरै व्यस्त रहियो, राति सुत्न पनि पाइएको छैन ।\_' आउनेबित्तिकै कमरेड पातालले आफू अत्यन्तै थकित भएको कुरा बताए ।
उनी जहिले र जहाँ भेट्दा पनि आफूलाई पार्टीामको ज्यादै बोझ भएको र अत्यन्तै व्यस्त रहने कुरा बताउने गर्थे । तर अब उनको कुराप्रति म शंकालु बन्न थालेको थिएँ, त्यस कुराको संकेत उनले पनि पाइसकेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ थियो । त्यसै कारणले पनि मेरा अधिल्तिर उनी अत्यन्तै सचेत भएर कुरा गर्ने कोशीस गर्थे । म नभएको मौका छोपेर भने उनी उग्र-क्रान्तिकारी गफ लगाउन पछि पर्दैनथे भन्ने कुरा मैले बाहिरका ढोका र चोटाहरुबाट धेरै पटक सुनेको थिएँ ।
पहिले-पहिलेझैं त्यस दिन पनि उनले उपस्थित भएका सबै साथीहरुसमक्ष आफूलाई त्यसैगरी प्रस्तुत गरे ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सांस्कृतिक रुपान्तरण नै भएन ! कमरेड पाताल बोल्दाबोल्दै गम्भीर भए ।
अघिल्लो पुस्ताका नेताहरुको व्यवहार र कुरामा कतै सामान्यजस्यता र तालमेल मिलेन । कमरेड पातालले चिन्तित मुद्रामा फेरि थपे ।
क्रान्तिका लागि भोक सामान्य कुरा हो ! कमरेड पातालले फेरि सहज जवाफ फाले ।
क्रान्तिका लागि दिनु परे त ठीकै हो । तर अहिले नै बलिदान दिनुपर्ने आवश्यकता छैन । कमरेड विशाखाले प्रत्युत्तर थपिन् ।
\_"तपाईंले र्सवहारा संस्कृतिलाई आत्मसात गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छैन । कमरेड पातालले उही बनिबनाऊ तर्कको फेरि झटारो हाने ।
\_"म ग्याष्ट्रिकको विरामी हुँ ! मैले केही नखाई हुँदैन । ट्रेड युनियनमा काम गर्ने मजदूर साथी कमरेड जसबहादुरले आफ्नो बाध्यता राखे ।
\_"भोको बस्न सकिँदैन भने क्रान्तिका लागि केही पनि गर्न सकिँदैन ।\_" कमरेड पातालले आफ्नो कुरालाई जाँतोझैं फेरि घुमाए ।
\_"खै ! नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन !\_" कमरेड पातालले फेरि निराश बनेझैं गरेर आफ्नो मुखाकृति बिगारे ।
\_"मैले कमरेड हिमालबाट पातालमार्फ् खानाको प्रबन्ध गरिएको सूचना पाएको थिएँ ।\_" कमरेड विशाखाले मेरो कानमा आएर खुसुक्क भनिन् ।
म कमरेड पातालसँगका सम्बन्धलाई लिएर केही समयदेखि र्सतर्क रहँदै आएको छु । तर्सथ पनि उनको बारेमा कुनै टिप्पणी भइहालेमा सचेत भएर प्रत्युत्तर दिन्छु । अझ, कसैले मेरो अघिल्तिर उनको प्रंशसा गर्‍यो भने म धेरैबेरसम्म पीडाले छट्पटिन्छु ।
\_"म एकछिन बाहिर पुगेर आइहाल्छु ।\_" कमरेड पाताल यसोभन्दै बाहिरिए ।
\_"भोकले पेटै दुख्नथाल्यो ।\_" कत्लेटी परेका ओठहरुबाट कमरेड सौरभ अलिकति हाँसे ।
\_"मसँग तीन रुपियाँ छ । अरुसँग जति छ, सबै निकालौं र पाउरोटी किनेर ल्याउFm । क. सौरभले सबैतिर हेरेर मलिनो स्वरमा एउटा प्रस्ताव फ्याँके ।
\_'पाउरोटी किनेर ल्याऊँ, मैले फेरि प्रस्तावलाई अघि बढाएँ ।
\_"सबैभन्दा सस्तो र राम्रो त्यही हुन्छ ।\_" कमरेड सौरभको भोक ब्यग्र भएर बल्यो ।
\_"तपाईं र म किनेर आऊँ । अरु साथीहरु काम गर्दै गर्नुहुन्छ ।\_" कमरेड जसबहादुरले मलाई संकेत गरेर जुरुक्क उठे ।
हामी दुइजना इन्द्रचोकको बहाल हुँदै पश्चिमतिरको गल्ली छिर्‍यां । हामी पाउरोटी पाइने पसलको खोजिमा थियौं । गल्लीतिर सोझिनेबित्तिकै छेउमा एउटा रेष्टुरेन्ट थियो । रेष्टुरेन्टको अघिल्लो भागमा आकर्ष र पारदर्शी सिसा लगाइएको थियो; जसबाट रेष्टुरेन्टभित्रको दृश्यलाई राम्ररी देख्न सकिन्थ्यो । रेष्टुरेन्टलाई नाघेर केही पाइलामात्र अघि बढेपछि क. जसबहादुरले मेरो कुमनेरको र्सटको भागलाई ताने । म एकाएक अचम्मित भएँ ।
\_"यता पछाडि फर्किनुस् त !\_" कमरेड जसबहादुरले दबेको स्वरमा मेरो कानमा आएर फुसफुसाए ।
\_"किन - के भयो -\_" म पनि उनको कुरा बुझन हतारिएँ ।
कमरेड जसबहादुरले मलाई विस्तारै दर्ुइ कदम पछि ताने र चोर आंैलाले पारदर्शी सिसाबाट रेष्टुरेन्टभित्र देखाए । उनले औंला देखाएको ठाउँमा कमरेड पाताल काँटा र चम्चालेे पिजा टुक्राउँदै खाइरहेका थिए । उनको अघि कोकाकोलाको बोतल पनि थियो । कमरेड जसबहादुरलाई अघिल्तिर तान्न खोजें । उनी कमरेड पाताललाई अझै हर्ेर्ने कोशिस गर्दैथिए । मैले रेष्टुरेन्टको पारदर्शी सिसाबाट भित्रतिर फेरि हेरें । अनायास कमरेड पातालका आँखाहरुसँग हाम्रा आँखाहरु जुधे । त्यसपछि कमरेड पातालले पिजा राखिएको प्लेटलाई आफ्नो शरीरले एक पटक छेक्न खोजे । तर त्यो छेकिएन । उनी त्यसपछि अर्कैतिर फर्किए ।
\_"यस्ता फटाहाहरुलाई पनि नेता मानेर हिंड्नुपर्ने -!\_" कमरेड जसबहादुरले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिए ।
"हेर न, उही कस्ता-कस्ता सांस्कृतिक कुराहरु गर्छ !\_" मैले पनि अलिकति प्रतिक्रिया नदिई बस्न सकिँन ।
"त्यो फटाहाको हामी सबैले भण्डाफोर गर्न सक्नर्ुपर्छ ।" कमरेड जसबहादुरले आक्रोशित भएर सबै साथीहरुसँग आफ्नो धारणा राखे ।
"यस्तो नेतृत्व भएपछि कसरी समाज र देशको परिवर्तन होला" बहसमा कमैमात्र उत्रने स्वभाव भएका कमरेड जसबहादुरले कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको अवसरवादका बारेमा सैद्धान्तिक छलफल गर्न खोजे ।
"नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले मानिसहरुको सांस्कृतिक पक्षलाई मूल्यांकनको विषय बनाएन । केवल सक्रियता र वाक्टुताको भरमा मानिसहरु नेतृत्व तहमा पुग्नथाले ।\_" कमरेड सौरभले पनि आफ्नो तर्क अघि सारे ।
चिसो हुस्सूले काठमाडौंलाई पुरै छोपेको छ । मलाई लाग्छ- म काठमाडौंमा आएपछि यति धेरै जाडोको महशूस कहिले पनि गरेको थिइनँ । आज बिहान एउटा मिटिङ्ग थियो । मिटिङको समय भने हुन लागिसक्यो । म सिरकभित्रै छु । आजको मिटिङमा पनि केन्द्रबाट कमरेड पाताल नै इन्चार्ज बनेर आउँदैछन् ।
ठानागाउँ-४, थामखर्क, उदयपुर